White Kitchen faucet neKuburitsa Out Sprayer
musha / Kicheni Faucets / WOWOW Muchena Jikoni Faucet Dhonza Pasi
WOWOW White Kitchen Faucet Dhonza Pasi
Iyo chena lacquer kicheni kicheni ine chitarisiko chitsva uye chazvino, uye ine mhedzisiro yeanti-kutu uye anti-kutu.
Iyo yepamusoro arc kicheni faucet EVE-0071-chena inounza ane maratidziro uye nyore maitiro. Iyo mitsara yakapfava uye yakajeka inowedzera chidikamwa chiri nyore kune yako iripo kicheni kurongedza Iyo gorofa kubata dhizaini inoita kuti zvive nyore kudzora tembiricha uye kuyerera, nepo chena inowedzera kunaka uye chimiro. Iyo dhizaini inotenderera ine miviriji inovandudza kushanda uye inosangana nezvinodiwa zvakasiyana mumabasa ekubika. Iyi inoshanda uye yakanaka faucet inoita kuti kicheni yako ive yakasarudzika.
Dual-basa pfapfaidzo musoro nePush bhatani switch: Mvura inoyerera modhi inoshandiswa jekiseni remvura, pfapfaidzo modhi inoshandiswa kupuruzira, imbomira kudzivirira kupwanya. Yakasimba muviri wendarira, isina-lead yendarira dhizaini, yepamusoro-soro, ngura inodzivirira chena pamusoro pekurapa. Iyo ceramic disc vharuvhu inodarika iyo yehupenyu indasitiri hupenyu, kuve nechokwadi kwekugara kwehupenyu hwebasa. Inogona kuwana yakanakisa tembiricha yemvura kudzora. Iyo pasuru inosanganisira zvese zvinokwira Hardware, inotonhora / inopisa mitsara yekupa uye pombi yemuviri. Tisati tatumira, tichaongorora zvigadzirwa zvese kuti tione mhando yezvigadzirwa. Usatombo kunetseka nekutenga.
SKU: EVE-0071-chena Category: Kicheni Faucets Tags: Kicheni Faucets, Buritsa
WOWOW Yekutengesa Pot Yekuzadza Tap Mafuta Oiri Akakwesha Bronze